अमिक शेरचनलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बन्न अफर आएको खुलासा ! - Rising Dainik
अमिक शेरचनलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बन्न अफर आएको खुलासा !
May 4, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on अमिक शेरचनलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बन्न अफर आएको खुलासा !
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त भएपछि अमिक शेरचनले आफू पदमुक्त हुँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार विहान पोखरास्थित प्रदेश प्रमुख निवासमा पत्रकार भेटघाटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आफूलाई पदमुक्त गरेको कुरा संचार माध्यमबाट मात्रै थाहा पाएको बताए । प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने बेलामा समेत आफू असन्तुष्ट रहेको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश प्रमुखमा प्रस्ताव गर्दा आफूले अस्वीकार गरेको भन्दै उनले तत्कालिन नेकपाले निर्णय गरेपछि बाध्यताले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको बताए ।
प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त गरिदिएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। ‘अधिकारविहीन खुला जेलबाट मुक्त गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद’, उनले भने। शेरचनले यसअघि नै राजीनामा दिन खोज्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेको समेत बताएका छन् । ‘मैले पहिले नै राजीनामा लिएर काठमाडौं गएको थिए, प्रचण्डजीले रोक्नुभयो’, उनले भने, ‘अहिले एकपटक जानकारी पनि नपाई पदमुक्त गरियो।’
गण्डकी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश प्रमुखका रुपमा शेरचनले १८ महिना काम गरे। प्रदेश सरकारले आफूलाई कुनै असहयोग नगरेको भन्दै उनले संविधानले दिएको कार्यभार पूरा गरेको बताए । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन बोलाउने सन्दर्भमा कतैबाट पनि दबाब नआएको समेत उनले बताएका छन् ।
‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष पद अस्वीकार गरेको व्यक्ति हुँ’
शेरचनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष पद विगतमा अस्वीकार गरेको समेत बताए । प्रदेश प्रमुख पनि अनिच्छाको पद भएको भन्दै उनले पदमुक्त हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
आफू पदको लोभी नभएको प्रष्टीकरण दिए । ‘सन्त नेता क। मनमोहन अधिकारीको निधनपछि एमाले पार्टीको अध्यक्ष पदमा आउन प्रस्ताव गर्दा पनि मैले स्वीकार गरिनँ,’ शेरचनले भने, ‘न त पदकै लागि वैचारिक आस्था बम्बैको कोठीमा बिक्री गर्ने व्यक्ति हुँ ।’
यस्तो छ अमिक शेरचनको प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ
आदरणीय पत्रकार साथीहरू
आज देश कोभिडबाट आतंकित र आक्रान्त बनेको छ । दैनिक मृ’त्युदर बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति र सहकार्यमा देशव्यापी सचेतना अभियान चलाई जनताको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्ने अहम बेलामा पार्टी–पार्टी बीचको फुट, पद र सत्तालिप्साको खेलमा देशलाई चुर्लुम्म डुबाइएको छ ।
सोच्नै नसकिने गरी बढ्यो अण्डाको मूल्य, बनायो नयाँ रेकर्ड !
दुवै डोज खोप लगाएकी जनप्रतिनिधिको कोरोनाबाट नि’धन
नेकपा प्रवक्तालाई प्रमका सल्लाहकारको जवाफ : गाडीमा ढुंगा प्र’हार गर्दा नदेख्ने, जिन्दावादको नारा कसरी सुनियोजित भयाे ?
१६ वर्षीय दिनेश भट्ट दो’षी ठहरिए कति हुन्छ सजाय ?
श्रीमान विदेशवाट आउनासाथ सीता खोलामा ब’ग्नुको यस्तो रहेछ रहस्य, सीताको माइती र राजु आमने सामने भएपछि खुल्यो वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस्)
April 2, 2021 Ramash Kunwar